प्रहरीको लज्जास्पद हर्कत- कुलमानको पक्षमा बोल्दा लखेटी लखेटी यसरि भयो कु’टपि’ट, भिडियोसहित — Sanchar Kendra
१शुक्रबार मध्यराति १२ बजेबाट नेपालमा लागु हुदैछ यस्ताे कडा नियम, हेर्नुहोस बिस्तृतमा
२प्रेमी दरबारसँग विवाह गर्दै बिग बोस विजेता गौहर खान, कहिले तय गरियो मिती ?
३कोरोना संक्रमणबाट निको हुनेको संख्या एक लाख नाघ्यो
४पूर्व सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि
५कोरोनाबाट थप २१ जनाको मृत्यु
६कोरोना संक्रमितको उपचार र परिक्षण निःशुल्क हुने
७२४ घण्टामा थप ३ हजार ६३७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
८ओलीले रअका प्रमुखलाई भेटेकोबारे भयो यस्तो खुलासा, नेकपाभित्र खैलाबैला, कसले के भने ?
९कोराना महमारीका बिच तीन नयाँ पुस्तक बजारमा
१०यी हुन् क्यान्सर रोगीले खानैपर्ने पेय पदार्थ
११प्रधानमन्त्रीले रअका प्रमुख भेट्नु आपत्तिजनक भन्दै भीम रावलले दिए कडा प्रतिक्रिया
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान प्रमुख कुलमान घिसिङको पक्षमा वकालत गर्ने एक जना युवक प्रहरीबाट निर्घात कुटिएका छन् । सामाजिक कार्य गर्ने १०० ग्रुपका संस्थापक सिराहाको लहान घर भएका बब्लु गुप्तालाई प्रहरी निरीक्षक केशर न्याैपानेसहितको टोलीले निर्घात कु’टपि’ट गरेको हो ।
प्रहरीले आफूहरुलाई कुनै कारणसमेत नदिइ अश्लील शब्द बोल्दै कु’टपि’ट गरेको उनले बताए । कुटाइबाट उनको खुट्टामा चोट लागेको छ । ‘हिजो एक्स रे पनि भयो, भित्रचाहिँ समस्या देखिएन’, उनी भन्छन् ।
‘भिडियो नआएको भए, अझै दुःख पाइन्थ्यो होला’, गुप्ता भन्छन्, ‘चौकीमा पुगेपछि चाहिँ मलाई सौहार्दपूर्ण व्यवहार भयो ।’ उनकै टोलीले बुधबार कुलमानको पक्षमा अनामनगर क्षेत्रमा मसाल जुलुस पनि निकालेको थियो ।
सर्वसाधारणलाई कु’टपि’ट गरेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालले छानविन गर्न मातहतको निकायलाई निर्देशन दिएको छ । महानिरीक्षकको सचिवालयका एक अधिकृतका अनुसार घटनाबारे छानविन गर्न भन्दै महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको छ । साथै, दोषी पाइए कारबाही गर्न पनि भनेको छ ।
यस्तै कुलमान घिसिङकै पक्षमा प्रदर्शन गर्ने अर्का व्यक्ति पनि घाइते भएका छन् । अनामनगरका मनिष श्रेष्ठ माइतीघरमा प्रहरीले कु’टपि’ट गर्दा घाइते भएका हुन् । प्रदर्शनमा सहभागी बद्रिप्रसाद ढुंगानाले बताएअनुसार प्रहरीको कु’टाइबाट घाइते उनको ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ ।
महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी सोमेन्द्रसिंह राठौरले भने प्रदर्शनका क्रममा लडेर श्रेष्ठ घाइते भएको दाबी गरेका छन् । शुक्रबार नै बानेश्वरमा पनि प्रहरी निरीक्षक डिल्लीराज सापकोटाको नेतृत्वमा आएको प्रहरीले संविधान दिवसको सन्दर्भमा अनलाइनखबरलाई प्रतिक्रिया दिइरहेका सर्वसाधारणलाई लाठी हानेको थियो ।
प्रहरीबाट आमनागरिकलाई कु’टपि’ट गरेको घटना पटकपटक सार्वजनिक हुने गरेका छन् । सार्वजनिक वृत्तमा आलोचना भएपछि प्रहरीले कारबाही पनि गर्ने गरेको छ । यद्यपि, प्रहरी आचरण र व्यवहारमा सुधार आउन सकेको छैन ।
यसैबीच संविधान दिवसबारे बोल्न खोज्दा प्रहरीले जनतामाथि लखेटी ल’खेटी कु’टपि’ट गरेको छ । शुक्रबार दिउँसो नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवननजिकै सडकमा संचारकर्मीसँग बोल्ने क्रममा प्रहरीले वसन्त पौडेललाई कु’टपि’ट गरेको हो । संविधानले हामीलाई के दियो ? भन्नेबारे ब्प्ल्दै गरेका पौडेलमाथि अचानक प्रहरीले धावा बोल्यो र उनलाई निकै परसम्म लखेटेर कु’टपि’ट गर्‍यो ।
संविधानले जनतालाई जति राहत दिनुपर्ने त्यति हुन नसकेको पौडेलले बताउँदै गर्दा प्रहरी निरीक्षक डिल्लीराज सापकोटाको नेतृत्वमा आएको टोलीले पौडेललाई बोल्न निषेध गरे । प्रहरीले संसद भवनअगाडि नै नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि धावा बोले ।
पत्रकारलाई पनि प्रहरीले दुर्व्यहार गरे । प्रहरी टोलीले सूचना विभागको कार्ड देखाउँदासमेत अन्तर्वार्ता दिइरहेका पौडेललाई लाठी हानेर अन्तर्वार्ता बिथोलेका थिए । पर पुगिसकेपछि पनि उनीमाथि प्रहरीले लखेट्दै गएर कुटपिट गरेको हो ।